အဘယ်ကြောင့်ပြင်ပဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စနစ်ရွေးချယ်? - လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသခြင်း
မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ sur အဘယ်ကြောင့်ပြင်ပဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စနစ်ကိုရွေးချယ်သနည်း။Posted in, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် Par Clemပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက် ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက်
မင်းကြားဖူးတာပဲ "ပြင်ပဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်"ဒါပေမယ့်သင်ကဘာလဲဆိုတာအတိအကျမသိပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးမှာပိုပြီးအသုံးများတဲ့ဒီစနစ်အကြောင်းပိုသိချင်လား။
ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာပြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုစီရဲ့ကွဲပြားမှုကိုနားလည်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့မင်းတို့နဲ့မင်းတို့အသေးစိတ်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ပြင်ပဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်!
ဒါ့အပြင် "ဟုကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်Totem"(အများအားဖြင့် LED) သည်သင့်အားအိမ်ပြင်တွင်ကြော်ငြာခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များပို့ခြင်းသို့မဟုတ်မြူနီစီပယ်ပွဲများ၊
ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ Totem အများစုဟာ LED နည်းပညာကိုသုံးထားတာကြောင့်၎င်းကိုဖြတ်သွားသူများကိုပိုမိုတောက်ပစေပြီးမျက်စိကျစရာဖြစ်စေသည်။
ပြင်ပဆိုင်းဘုတ်စနစ်သည်သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအလွယ်တကူကြော်ငြာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤစနစ်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော်လည်းအရွယ်အစားအမြောက်အများမှရရှိနိုင်သည် ၂၄ လက်မမှ ၈ လက်မ.
ဤကဲ့သို့သောစနစ်ဖြင့်သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုရှေ့သို့တင်ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုမှထွက်ခွာရန်သေချာသည်။ ထို့အပြင်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်ဟာလုံးဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးသင့်ဆန္ဒနဲ့အညီသင့်ရဲ့ display ကိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်။
ဤစနစ်၏စျေးနှုန်းသည်စက်နှင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤစုစုပေါင်းကွန်ပျူတာအများစုတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောကွန်ပျူတာရှိသည်။ သင်တစ် ဦး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းအကွာအဝေးချင်လျှင်သင်ရေတွက်နိုင်ပါတယ် 1000 €နှင့် 8000 €အကြား တစ် ဦး သို့မဟုတ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပေးဆောင်။
အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကိုဤဘာသာရပ်အပေါ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ "ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ပြသခြင်းဆိုတာဘာလဲ။"သို့မဟုတ်"ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းအင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အတူသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း ၅ ခု".
သငျသညျကိုလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်အများအပြားစိတ်ဝင်စားဖို့ဆောင်းပါးများကိုကိုးကားထားတဲ့က်ဘ်ဆိုက်။